पूर्वमन्त्री अति गरिबको सूचिमा ! – Everest Dainik – News from Nepal
पूर्वमन्त्री अति गरिबको सूचिमा !
काठमाडौं, साउन २९ । बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका निवासी गणेश खड्का पूर्वस्वास्थ्य अधिकृत हुन् । खड्काका जेठा छोरा डाक्टर छन् । पोखरामा उनको निजी अस्पताल छ। खड्काका अर्का छोरा इन्जिनियर छन् । बुहारी क्याम्पसमा पढाउँछिन्।
खड्का परिवार गरिबको सूचीमा छ तर खान लगाउन नपुग्ने सोही नगरपालिकाका माना खड्का भने त्यो सूचीमा परेका छैनन् । त्यस्तै बाजुराका जनकराज गिरीको परिवार पनि अति गरिबको सूचीमा छ। गिरी पूर्वभूमिसुधार सहायकमन्त्री हुन्। त्यस्तै बडिमालिका नगरपालिकाका उपप्रमुख कविता विष्टदेखि बुढीनन्दा नगरपालिका-१ का अध्यक्ष नृपराज दुवैजना गरिबको सूचीमा छन् ।
पहिलो चरणमा बाजुरा, बझाङ, कैलालीसहित २५ जिल्लमा गरिब परिवार पहिचान गरी परिचयपत्र उपलब्ध गराउने सरकारी नीति छ । २०७० सालमा संकलित तथ्यांकअनुसार गरिबको सूची बनाइएको छ । गरिबलाई पनि तीन वर्गमा छुट्याएर तीन महिना पनि खान नपुग्ने अति गरिबको सूचीमा राख्ने नीति छ । तर संकलित सूचीमा रहेका सबै वास्तविक गरिब भने छैनन् । हचुवाको भरमा तथ्यांक संकलन गरिएकाले गरिब घरपरिवार सूचीमा पर्न नसहेका हुन् । नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
ट्याग्स: Garib Paricjhaye patra, जनकराज गिरी